I-RASCULAR IBC 2019 PREVIEW - I-NAB Bonisa Izindaba nge-Broadcast Beat, Umsakazo Osemthethweni we-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
Ikhaya » Izindaba » I-RASCULAR IBC 2019 PREVIEW
Cabanga Control, Cabanga I-Rascular
I-Rascular iyinkampani yokuklama isofthiwe eyenza izinhlelo zokulawula ngokucacile zethuluzi lobuchwepheshe be-third party, lobuchwepheshe bevidiyo. Sisebenza kulo lonke uhlelo lokusakazwa, ukusakaza kanye ne-A / V. I-Bespoke noma i-off-the-shelf, izicelo zethu zisebenza kuwo wonke ubuchwepheshe be-SDI ne-IP, kufaka phakathi I-Newtek's UJ® i-protocol, ukuhlinzeka ngamaphaneli aphethwe ngamathempulethi noma asebenzisa umsebenzisi avumela ukufinyeleleka kunoma yikuphi ukusebenza okudingekayo, ukunikeza abasebenzisi ukulawulwa okuqondile okudingayo, ngisho nakakhulu.
I-Rascular iye yaqhubeka yokwandisa ukuhlanganiswa kwayo I-Newtek's UJ® protocol, ememezela ukuthuthukiswa Lahla, isicelo esisha se-Helm, esihlinzeka nge-master control switching kwisofthiwe. Lokhu kuvumela abasebenzisi ukuthi bathole kalula futhi babuke imithombo engenayo, ethunyelwe ku-multiviewer. Ngaphezu kwalokho, i-Castaway ihlanganisa nokubonisana kombono / isethulo sokushintsha amandla okuphatha ukuguqulwa, ukungena kwe-logo nokunye okunye. I-Rascular ye-standalone ye-NA yokusebenzisa uhlelo lokusebenza I-RouteMaster-Lite futhi izuzisa kulezi zakhono ezintsha ze-multiviewer.
Helm izinzuzo kusuka ekuthuthukiseni okunye, kufaka phakathi ikhono lokulawula manje I-Blackmagic Designs multifaceted HyperDeck ukusakaza ama-deck. Nge-Helm, abasebenzisi manje bangadonsela bese bephonsa amaqembu okulawula okuthutha oyedwa kumaphaneli womsebenzisi ukunikeza ukulawula iseva elula. I-Helm ishlanganiswa neContour ShuttlePro Isondo le-USB / i-shuttle, isilawuli esilula, esisebenzayo esisebenza eceleni kwekhibhodi kanye negundane, manje isakwazi ukusetshenziselwa ukulawulwa kwezokuthutha kwe-server ku-Helm. I-PESA I-router control iyatholakala ne-Helm.
Ukuhlanganiswa kwe-Helm ne-YouTube ne-Facebook Live
Kububoniso okokuqala ku-IBC 2019, i-Rascular igcizelela ikhono layo lokunikeza ukuqondisa okuqondile kokusakazwa bukhoma kwe-YouTube ngaphezu kokukwazi kwayo ukuvumela ukusakaza okulula ku-Facebook Live, usebenzisa uHelm technology control Helm. Lokhu kungafinyelelwa nge-Helm kwi-PC noma ngamaphaneli e-web ahlukene adivayisi.
I-WebCentre uhlelo lokusebenza oluzimele lwedivayisi olunikeza ukudala indima yomsebenzisi esekelwe kwisiphequluli nokuphatha, ukumisa iphaneli yokulawula nokufinyelela kulawo mapaneli wokulawula idivayisi. Isekusekelwe kwiseva-based, nanoma yisiphi isiphequluli samanje kunoma iyiphi idivayisi - tablet, i-PC, i-smartphone - ikwazi ukufinyelela amaphaneli okulawulwa komsebenzisi ngokusho izilungiselelo zokuphathwa komsebenzisi. Ukusebenzisa i-HTTPS, ivikelekile ngokugcwele.
I-RouteMaster-Lite i-standalone, i-PC-based, isicelo selayisense esisodwa, esekelwe kumthamo we-Rascular sika-PowerMaster onamandla futhi iklanyelwe ukuhlinzeka ukulawula okuphelele kwemithombo ye-UJ kuze kube sezingeni eliphakeme le-20 × 20 router.
I-RouteMaster ihlanganisa ubuchwepheshe be-Rascular's control and emulation technology ukwakha uhlelo olunamandla kodwa oluguquguqukayo lokulawula umzila. Eyakhelwe kumamojula we-software ahlolwe futhi ahlolwe, i-RouteMaster ingasetshenziswa ngezingqikithi eziningi zokusakaza ividiyo nama-routers alalelwayo - ezedlule, ezamanje nezesikhathi esizayo, i-SDI ne-SDI / IP hybrid - kusukela kubakhiqizi abakhulu be-router. Ibuye inikeze ukulawulwa kwemithombo ye-UN. Kulungile ngokufanele ukufakwa okusha kwe-router noma ukwandisa amandla - nokuphila kwesikhathi - kwezinhlelo ezikhona. I-RouteMaster nayo manje ihlanganisa amakhono we-tie-line, okuvumela ukuhlanganiswa okulula komzila we-UJ okwenziwe ku-SDI.
I-LiveU 2019 Isimo Sombiko Oukhoma iqinisekisa Ukukhula Okuqinile Kokusakazwa Okubukhoma kwe-IP - Disemba 12, 2019
Izinhlelo zokulawula i-AV Lawula Ukulawulwa Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe Control System I-Digital Nirvana I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor I-IBC Ukuhlanganiswa ukuqapha imidiya I-NDI ukulawulwa kwesofthiwe I-subtitling umbhalo we-subtitling, i-Digital Nirvana, ukuqapha imidiya, i-IBC Umlingisi wevidiyo	2019-07-12
Ngaphambilini: Ukungakhokhi: Ukukhiqizwa & Ukuthuthukiswa / Ukuhlela Ngaphakathi
Olandelayo: Injini Yokukhiqiza